Author Topic: Zenisha moktan NEw MISS NEPAL 2009(added) (Read 94672 times)
« Reply #10 on: September 26, 2009, 04:13:17 AM »
मिस नेपालको भिडियो इन्टरनेटमा?
किन गइनन, पूर्व मिस नेपाल?
काठमाडौं, ९ असोज (दैनिकी)
पूर्व मिस तामाङ २००६ ले जेनिसा मोक्तानले यो वर्षको मिस नेपालको ताज पहिरिएपछि बजारमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । जसले मिस नेपालका लागि तोकिएका आधार र मापदण्डमाथिनै प्रश्न उठाएको छ ।
मिस तामाङको ताज जितेपछि उनी मिडियामा छाइन र उनले केही म्युजिक भिडियो पनि खेलिन । त्यहीबीचमा उनको भनिएको एक अश्लिल भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । अहिले पनि त्यो भिडियो इन्टरनेटमा व्यापक छ ।
"हिजो यो निर्णयबाहिर आउने वित्तीकै म त छक्कै परेँ अनि मेरो मोबाइलमा हेर्दा त त्यही भिडियो छ"- एक चर्चित कला पत्रकारले भने- कुनै पनि सहभागीलाई मिस नेपाल बनाउनु पूर्वका मापदण्ड के हुन हिडेन ट्रेजरले भन्नु पर्छ ।
मिस नेपाल प्रतियोगिताहरुमा अघिल्लो वर्षकी विजेताले नयाँ विजेतालाई ताज लगाइदिने चलन हुन्छ तर यसपटको मिस नेपाल प्रतियोगितामा अघिल्लो पटककी विजेता सितष्मा चन्द सहभागी नभएपछि पहिलो मिस नेपाल रुवी राणाले नयाँ विजेता जेनिसा मोक्तानलाई ताज पहिर्र्याइ दिइन ।
विगतमा २५ देखि ३० जना सहभागी हुने मिस नेपाल प्रतियोगितामा यो वर्ष जम्मा १६ जना सहभागी भए, त्यसमध्ये पनि फेसन डिजाइनर रिंकु श्रेष्ठले अन्तिम समयमा आएर सहभागिता त्यागेपछि १५ जनामध्येबाट मोक्तानले मिस नेपाल २००९ को ताज पहिरिएकी हुन ।
गत वर्ष पनि मिस नेपालमा भाग लिएकी जेनिसानै यो वर्षकी मिस नेपाल भएकी छिन । तर माओवादी महिला संगठनहरूको विरोध/अवरोधका कारण गत वर्ष सो प्रतियोगिता नै हुन नसकेपछि उनी यसपटकको प्रतियोगितामा पुनः भिडेकी थिइन। उनले यसअघि मिस तामाङ २००६ को उपाधि जितेकी थिइन ।
जेनिसाले शिरमा मिस नेपालको ताज चम्काउनुका साथै ५० हजार नगद प्राप्त गरेकी छिन् भने डिसेम्बरमा सम्पन्न हुने मिस वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्।
फर्स्ट रनरअपको ताज पहिरिन सफल ऋचा थापामगरले २५ हजार नगद प्राप्त गरेकी छिन् भने उनले मिस अर्थमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिता जनाउनेछिन्।
डाईबर दाई मन पर्यो मलाई बोलको लोकगीतमा आकर्ष नृत्य गरी मिस ट्यालेन्टको उपाधिसमेत हात पारेकी ऋचाले मिस पर्सनालिटीको उपाधि पनि आफ्नै पोल्टामा पारिन्। सेकेन्ड रनरअपको ताज आफ्नो शिरमा चम्काउँदै कुन्छाङ मोक्तान तामाङले १५ हजार नगद पुरस्कार थापेकी छिन्।
त्यसै गरी आयुषा कार्कीले मिस फोटोजेनिक र ब्युटी कम्प्लेक्सका उपाधि थापेकी छिन् भने ब्युटिफुल हेयरमा पद्मनि झाले बाजी मारेकी छिन्।
प्रतियोगीहरू स्वयमले छनोट गर्ने मिस फ्रेन्डसिपको उपाधिचाहिँ अस्मिता अग्रवालले हात पारिन् भने दर्शकमतका आधारमा आकृति श्रेष्ठ पब्लिक च्वाईस बन्न पुगेकी छिन्। पुनम थपलियाले ब्युटिफुल स्माईलको उपाधि जितेकी छिन्। शीर्ष तीन उपाधिबाहेक अन्य उपाधिविजेता प्रत्येकलाई ५/५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।
« Reply #11 on: September 26, 2009, 09:03:17 AM »
JPT MISS NEPALI HARDAI MISS NEPAL JASTO CHA YESTO BHALU LYA KYA NEPAL LIE REPRESENT GARCHA HO.....
« Reply #12 on: September 26, 2009, 09:44:10 AM »
« Reply #13 on: September 26, 2009, 09:44:50 AM »
« Reply #14 on: September 29, 2009, 01:00:27 AM »
« Reply #15 on: September 29, 2009, 01:22:49 AM »
« Reply #16 on: October 01, 2009, 04:09:49 AM »
« Reply #17 on: October 01, 2009, 04:10:13 AM »
News of : 2006-01-29
Jenisha Moktan is Miss Tamang!
With indigenous beauty pageants sprouting like mushrooms in the capital, there was one more that added the list with the Miss Tamang 2006 Competition that took place at the Radisson Hotel last Saturday night amongst much zealous and vibrant crowd of around 300 people.
Seventeen-year-old Jenisha Moktan, the youngest contestant of them all, clinched the glorious title superseding 14 other strong contenders.
Pravin Shrestha and Srijana Moktan of the organizing group, Creative Fashion Field, said that the contest wasasmall way of flourishing the Tamang culture, customs and lifestyle outside their fraternity.
After the introductory round and the best dress parade, the initial 15 contestants were slimmed down to 11 and then further minimized to just five from whom the top three beauty queens were nominated.
All the 15 beautiful belles attired in their traditional Tamang dress made one last round on the stage before the announcements of the title winners, which was the highlight of the event.
Some of the girls who didn't clinch any titles nevertheless wore broad smiles on their faces, simply because they were proud to be born toasmall but rich and invaluable fraternity of Tamangs.
Miss Tamang: Jenisha Moktan
1st Runner-up: Anjana Moktan
2nd Runner-up: Bidya Singtan
Viewers� Choice: Jenisha Moktan
Miss Catwalk: Bidya Singtan
Miss Personality: Jenisha Moktan
Best Dress: Dhana Kumari Dong
Miss Talent: Dhana Kumari Dong
Miss Photogenic: Shanta Maya Ghising
Miss Best Performance: Noyin Gole
« Reply #18 on: October 03, 2009, 01:44:23 AM »
jhandai crown khaseko yaar hoina ke ho tesko crown janta haru le khoscha jasto cha ni tesai ta virod vayeko vayeko cha
« Reply #19 on: October 04, 2009, 11:38:13 PM »
म जे हुँ त्यही देखाएँ - मिस नेपाल जेनिशा मोक्तान
फूलमान वल, २०६६ आश्विन १६, शुक्रवार
जेनिशा मोक्तानको यो साता निकै व्यस्तताबीच गुज्रियो । मिस नेपाल भएपछि बधाईको ओइरोमात्रै लागेन, अभिभावकदेखि साथीभाइ र शुभ-चिन्तकसम्मले उत्तिकै प्रोत्साहन र स्याबासी दिए । काठमाडौंमा जन्मी हुर्की, दार्जिलिङस्थित माउन्ट हर्मन स्कुलबाट स्कुले पढाइ सिध्याएका बीस बर्षिया जेनिशा पहिलो मिस तामाङ पनि हुन् ।
दसैं कस्तो भयो त ?
दसैं नै भनेर खासै मनाइन्न । साथीभाइ र आफन्तजन भेटघाट, खानपिन र रमाइलो चाहिँ गरिन्छ । बुद्धिष्ट परिवार भएको हुनाले काटमार नचल्ने भएर होला, मैले सम्झेदेखि दसैं मनाएको था' छैन । तर यसपटकको दसैं किन पनि थप रमाइलो भयो भने छुट्टएिका र बिछोडिएका फ्यामिलीहरूसँग पनि भेटघाट भयो । मिस नेपाल जितेको खुसी त छँदै थियो ।
मिस नेपाल हुन्छु भन्ने लागेको थियो ?
डेफिनेट्ली । सबैले जित्छु नै भन्ने हिसाबले भाग लिएका हुन्छन् । मलाई पनि मिस नेपाल हुन्छु भन्ने पूर्ण आत्मविश्वास थियो ।
कस्तो लागिरहेको छ त ?
एकदमै ह्याप्पी र एक्साइटिङ । शब्दमा वर्णन गर्नै सकिन्न ।
मिस नेपाल हुनुमा आफ्नो खास के गुणले काम गरेको जस्ता लागिरहेको छ ?
हेर्नुस्, सबैले एउटै ट्रेनिङ लिने हो । एउटै ज्ञान सिक्ने र एउटै एक्सपिरेन्स गर्ने हो । तर जति सिकाइयो नि ! त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका चाहिँ सबैको फरक हुन्छ । मेरो विचारमा मेरो प्रस्तुतिमा एकदमै इन्डिभिज्युआलिटी, युनिकनेस र क्लारिटी थियो । म जे हुँ त्यही देखाएँ । सायद यही मेरो जितको कारण बन्यो ।
निर्णायकको प्रश्नको जवाफ अलि बौद्धिक भएन पनि भन्छन् नि !
त्यो नितान्त व्यक्तिगत र मौलिक जवाफ थियो । अहिलेसम्म कसैलाई नभनेको इन्सिडेन्ट सोधिएको थियो, मैले आफ्नै अनुभव बताएँ । सायद पोजेटिभ म्यासेज भएर होला ।
मिस नेपाल प्रतियोगिता सुटुक्क गरियो पनि भने है..
कसरी सुटुक्क ? कसरी गुपचुप ? मुलुकको राष्ट्रिय टिभी अफिसियल मिडिया थियो । दुइटा अफिसियल पत्रिका (नेपाली र अंग्रेजी दुवै) मा दिनहुँ छापिरहेकै थियो । अनि कसरी सुटुक्क भयो ? ]
विरोध प्रदर्शन पनि त भयो नि !
अँ, सानातिना विरोध प्रदर्शन भएछ ।
उनीहरुप्रति के छ दृष्टिकोण ?
मेरो बुबाआमासँग -जीवन मोक्तान र विमला राई) त मेरो विचार मिल्दैन भने उहाँहरूसँग मिल्नै पर्छ भन्ने त छैन नि ! उहाँहरूको दृष्टिकोणमा विरोध गर्नु ठिकै होला । त्यसप्रति म केही भन्न चाहन्न । तर मैले आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्न पाउनु मेरो व्यक्तिगत रुचि र अधिकारको कुरा हो नि ! फ्रिडम अफ च्वाइस् हो नि !
मिस नेपाल भएपछि के के गर्नुपर्छ ?
इस्पेसिफिक त नभनौं, लामो हुन्छ । युथलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो । सकेको ठाउँबाट आवाजविहीनहरूको पक्षमा आवाज उठाउनु पर्‍यो । मिस वल्र्डसम्म आफ्नो ट्यालेन्ट सो गर्नुपर्‍यो ।
अक्टोवर त लागिसक्यो । डिसेम्बरमा हुने मिस वल्र्डको तयारी ?
अँ, तयारीमा लागि सकेकी छु । आफ्नो मुलुकको सांस्कृतिक, सामाजिक र भौगोलिक चिनारी झल्काउने तयारी हुनेछ मेरो । नेपाली योङ वुमन पनि उत्तिकै आत्मविश्वासी छन् भन्ने देखाउन चाहन्छु ।
आवाज चाहिँ कसको पक्षमा उठाउने ?
दुइटा अपरच्युनिटी दिइएको छ । पहिलो त म आफू नेपाल तामाङ महिला घेदुङको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएकीले पनि महिला समस्याको क्षेत्र रोज्छु होला । अनि युथ प्रब्लममाथि पनि आवाज उठाउँछु ।
मिस नेपाल हुनुभन्दा केही अघि ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिको जुलुसमा देखिएको थियो....
हो, मैले मेरो आँखाबाट ताम्सालिङ आन्दोलन बुझ्न खोजेकी थिएँ । र, ममा त्यतिबेला मिस तामाङको रेस्पन्सिविलिटी पनि थियो ।
हेर्नुस्, तामाङ हुनुमा म आफूलाई निकै गर्व गर्छु । तर अब म मिस तामाङबाट मिस नेपाल भएँ । मैले आफूलाई तामाङमात्र होइन नेपाली भएर प्रस्तुत गर्नुपर्छ । आफैलाई डिभाइड गर्नु हुन्न । दक्षिण अफ्रिकाको जोहनेसवर्गमा हुने मिस वल्र्डमा पनि तामाङमात्र भएर होइन, सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधि भएर जाने हो । ममा रेस्पन्सिविलिटी अब फराकिलो भएको छ ।
तत्कालको योजना ?
पाठेघर खस्ने महिलाका उपचारका लागि फन्ड रेजिङमा लाग्दैछौं । मैले उनीहरूको कथा सुनेकी/पढेकी छु । उपचारमा समस्या भएका महिलालाई निःशुल्क अप्रेशन गर्ने अभियानमा लाग्दैछौं ।